Laf-dhabartii Manchester City Oo Ku Biiray Liiska Dhaawacyada Ee Halista Ugu Jira Inay Seegaan Kulanka Arsenal Ee Sabtida - Gool24.Net
Laf-dhabartii Manchester City Oo Ku Biiray Liiska Dhaawacyada Ee Halista Ugu Jira Inay Seegaan Kulanka Arsenal Ee Sabtida
Manchester City oo ay kusoo fool leedahay kulanka adag ee Sabtida ay ku qaabbili doonaan Arsenal ayaa waxa loo sheegay inuu dhaawacan yahay laacibkooda khadka dhexe ee Kevin de Bruyne oo wax ku noqday kulankii waddankiisu la ciyaaray England toddobaadkan.
Kevin de Bruyne ayaa la beddelay qaybtii labaad ee kulankii Wembley ee Belgium lagaga badiyey 2-1, guushuna raacday England Axaddii, waxaana uu maalintii xigtay ee Isniinta ka baxay xarunta tababarka isaga oo dareemaya xanuun.
Manchester City ayaan war-rasmi ah kasoo saarin laacibkoodan, laakiin tababaraha xulka qaranka Belgium ee Roberto Martinez ayaa xaqiijiyey in aanu tababarkii Isniinta la qaadanin ciyaartoyda kale oo xaaladdiisa la qiimaynayo.
Laacibkan ku guuleystay abaal-marinta PFA ee xiddigii ugu wanaagsanaa horyaalka Premier League xili ciyaareedkii hore, ayuu dhaawaciisu halis ku yahay Manchester City, waxaana la filayaa in inta ka horreysa Khamiista ay war buuxa kasoo saarto kooxdiisu haddii dhaawaciisu yahay mid halis gelin karaya inuu u safto ciyaarta ay Arsenal ku qaabbilayaan.
Manchester City oo ay hore uga dhaawacnaayeen Gabriel Jesus oo wax ku noqday ciyaartii Wolves, isla markaana aan kasoo xaadirin afartii ciyaarood ee xigay ee Bournemouth, Leicester City, Burnley iyo Leeds United, halka Sergio Aguero uu muddo dheer garoomada ka maqnaa.
Dhaawaca cusub ee De Bruyne ayaa noqonaya mid kaga xanuun badan Man City labada weeraryahan ee Jesus iyo Aguero, laakiin tababare Martinez ayaa xusay in aanu si buuxda u odhan karin in uu dhaawacan yahay, isla markaana aanu tilmaami karin inuu badqab yahay.